၆ – သဟဇာတပစ္စယော Sahajāta Paccayo (Presence condition) (4 of 6) – Dhamma Training Center
၆ – သဟဇာတပစ္စယော Sahajāta Paccayo (Presence condition) (4 of 6)
၆ – သဟဇာတပစ္စယော
သဟဇာတ Born together or conascence.
သဟ = အတူတကွ၊ ဇာတ = ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Born together or conascence.
သဟဇာတပစ္စည်း၏ ကျေးဇူးပြုပုံကို အဋ္ဌကထာများတွင် မှောင်နေသည့် တိုက်ခန်းထဲ၌ ဆီမီး ထွန်းလိုက် သည်နှင့် ဆီးမီးတောက်ခြင်း၊ အလင်းရောက်ခြင်းနှင့် အမှောင်ပျောက်ခြင်းတို့သည် တစ်ပြိုင်တည်း၊ တစ်ချိန်တည်း ပေါ်ပေါက်လာကြသကဲ့သို့ စိတ် စေတသိက်မှန်သမျှ ဥပါဒ် ဌီ ဘင်အားဖြင့် တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်လာ၏ Born together ဟု ဥပမာ ပြုတော်မူကြပါသည်။
မီးတောက်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် အလင်းရောင်ဟူသော အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာရာတွင် အကြောင်းနှင့် အကျိုးက တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ အချိန်အားဖြင့်လည်း တစ်ချိန်တည်းဖြစ်ပေါ်ကာ ကျေးဇူးပြုသည့်နှယ် ဖြစ်၏။ ဤတွင် မဟာဘုတ်များတပြိုင်တည်း Born together ဖြစ်လာ၏။ စိတ်နှင့် စိတ္တဇရုပ်များလည်း တပြိုင်တည်း Born together ဖြစ်လာကြ၏။
သဟဇာတပစ္စည်း၏သင်္ချာမှာ – ၉ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ‘သဟဇာတေ န၀’ ဟု မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ထိုသင်္ချာကို အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည် –
ကုသလ ဓမ္မာ သင်္ချာ–၃
(၁) ကု-ကု (၂) ကု-ဗျာ (၃) ကု-ကု-ဗျာ
အကုသလ ဓမ္မာ သင်္ချာ–၃
(၁) အကု-အကု (၂) အကု-ဗျာ (၃) အကု-အကု-ဗျာ
အဗျာကတ ဓမ္မာ သင်္ချာ–၁
ကုသလ ဗျာကတပဒ သင်္ချာ –၁
အကုသလ ဗျာကတပဒ သင်္ချာ –၁
ပုရေဇာတ၊ ပစ္ဆာဇာတနှင့် သဟဇာတ
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်၌ ပစ္စယ = ပစ္စည်းဟူသော အကြောင်းတရားနှင့် ပစ္စယုပ္ပန်ဟူသော အကျိုးတရားတို့ ရှိရာတွင် –
(က) ဦးစွာ အကြောင်းတရားပေါ်ပြီး အကျိုးတရားက နောက်မှပေါ်သည့် (ပုရေဇာတပစ္စည်း) Born earlier or prenascence.
(ခ ) အကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးတရား တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်ပေါက်လာသည့် (သဟဇာတပစ္စည်း) Born together or conascence. နှင့်
(ဂ ) ဦးစွာအကျိုးတရား ပေါ်ပေါက်လာပြီး အကြောင်းတရားက နောက်မှပေါ်လာသည့် (ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စည်း) Born laterer or postnascence. ဟူ၍ ရှိပါသည်။
သဟဇာတပစ္စည်းတွင် အကြောင်းဖြစ်သည့် ပစ္စည်း၌လည်း ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားပါသည်။ အကျိုး တရားဖြစ်သည့် ပစ္စယုပ္ပန်၌လည်း ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားများပါသည်။ ထို့ကြောင့် သဟဇာတပစ္စည်းတွင် ရုပ်နှင့် နာမ်က အကြောင်းတရားလည်း ဖြစ်သည်။ အကျိုးတရားလည်း ဖြစ်သည်။
စတ္တာရော အရူပိနော = နာမ်ခန္ဓာလေးပါးဖြစ်သည့် ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာ ဏက္ခန္ဓာ ရှိသည့်အနက် –
(က) နာမ်ခန္ဓာတစ်ပါးက သုံးပါးကို ကျေးဇူးပြုရာတွင် ဥပမာ ဝေဒနက္ခန္ဓာက အကြောင်းတရား ဖြစ်ပါက ကျန်သုံးပါးဖြစ်သည့် သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာတို့က အကျိုးတရား။ “ဧကော ခန္ဓော တိဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။”
(ခ ) နာမ်ခန္ဓာနှစ်ပါး ကျန်သုံးပါးကို ကျေးဇူးပြုရာတွင် ဥပမာ ဝေဒနက္ခန္ဓာနှင့် သညာက္ခန္ဓာက အကြောင်း တရားဖြစ်လျှင် ကျန်နှစ်ပါးဖြစ်သည့် သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် ၀ိညာဏက္ခန္ဓာက အကျိုးတရား။
“ဒွေ ခန္ဓော ဒွေဏ္ဏန္နံ ခန္ဓာနံ သဟဇာတပစ္စယေန ပစ္စယော။”
နာမ်ခန္ဓာ ၄–ပါးကို ခန္ဓာဖွဲ့ပါက –
စတ္တာရောခန္ဓာ အရူပိနောဓမ္မာ = (နာမ်ခန္ဓာလေးပါး) ၁ – ဝေဒနက္ခန္ဓာ၊ ၂ – သညာက္ခန္ဓာ၊ ၃ – သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၊ ၄ – ၀ိညာဏက္ခန္ဓာကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စေတသိက် ၅၂–ပါးကို ခန္ဓာဖွဲ့ပါက –
– ဝေဒနာစေတသိက်က ဝေဒနက္ခန္ဓာ တစ်ပါးရ၏။
– သညာစေတသိက်က သညက္ခန္ဓာ တစ်ပါးရ၏။
– ကျန်သည့်စေတသိက် – ၅၀ က သင်္ခါရက္ခန္ဓာတစ်ပါးရ၏။
– စိတ် ၈၉-ပါးက ၀ိညာဏက္ခန္ဓာရ၏။
ဤနာမ်ခန္ဓာတို့သည် သဟဇာတ = အတူတကွ။ အညမည = အပြန်အလှန်အားဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။
သူတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် စိတ္တဇရုပ်ကိုလည်း ကျေးဇူးပြု၏။ ပါဠိစာပေ၌လာရှိသည့် ပဋိသန္ဓိကို မြန်မာ စာပေတွင် ပဋိသန္ဓေဟု သုံးနှုန်းသည်။ ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘ၀ဟောင်းနှင့် ဘ၀အသစ်ကို ဆက်စပ်ပေး သည့်စိတ် ဖြစ်ပါသည်။ ပဋိသန္ဓေစိတ်ကို နေရာအားလျှော်စွာ ၀ိပါက်စိတ်ဟုလည်း ခေါ်၏။
ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်၌ ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်ပါသည်။ ခဏငယ်သုံးချက်အတွင်း ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်က (အကြောင်း တရား)၊ ပဋိသန္ဓေစိတ်ကလေးက (အကျိုးတရား)အဖြစ် သဟဇာတသတ္တိနှင့် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူး ပြု၏။
အမိဝမ်းထဲ ပဋိသန္ဓေတည်သည့် သတ္တ၀ါတို့တွင် နာမ်တရားအဖြစ် ပဋိသန္ဓေ၀ိညာဏ်စိတ်နှင့် စေတသိက် ၃၃-ပါး၊ ရုပ်တရားအဖြစ် ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ၀တ္ထုဒသကဟူသော ကံကြောင့်ဖြစ်သည့် ကမ္မဇရုပ် ကလာပ် သုံးစု (သုံးစည်း) တို့သည် တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်လာကြသည်။
ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသကနှင့် ၀တ္ထုဒသက
(က) ကာယဒသကဟူသည် ကာယပသာဒ၊ ဇီဝိတရုပ်၊ အဋ္ဌကလာပ်ရုပ် ၈-ပါး ဟူသော ကာယ ဒသက။
(ခ ) ဘာဝဒသကဟူသည် ကမ္မဇကလာပ် ကိုးစည်း၌ပါသည့် အထီး အမ ခွဲခြားစေသည့် ဣတ္ထိဘာဝ ဒသက ကလာပ်ဖြစ်စေ၊ ပုမ္ဘာဝဒသကကလာပ်။
(ဂ) ၀တ္ထုဒသကဟူသည် ဟဒယ၀တ္ထုရုပ် ဇီဝိတ အဋ္ဌကလာပ်။
(ဃ) သုတ္တန်ဒေသနာတော်အရ ပဋိသန္ဓေအခါကိုယူရာတွင် အမေ့ဝမ်းထဲ ရောက်သည့်အချိန်ကစပြီး မဖွားမချင်း ကာလကို ယူပါသည်။ အဘိဓမ္မာဒေသနာ၌မူ ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ ဥပါဒ် ဌီ ဘင် ခဏငယ် သုံးချက်အတွင်းကိုသာ ပဋိသန္ဓေအခိုက်ဟု ယူပါသည်။
ပဉ္စဝေါကာရ၊ စတုဝေါကာရ၊ ဧကဝေါကာရ
(က) စတုဝေါကာရဘုံဟူသည် နာမ်ခန္ဓာလေးပါးသာ ရှိသည့်ဘုံ။
(ခ ) ဧကဝေါကာရဘုံဟူသည် ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိသည့် အသညသတ်ဘုံ။
(ဂ ) ပဉ္စဝေါကာရဘုံဟူသည် ခန္ဓာငါးပါးရှိသည့်ဘုံ။ ထိုထိုဘုံများအနက် ခန္ဓာငါးပါးရှိသည့် ဘုံကသာ ပဋိသန္ဓေနှင့် ဟဒယ၀တ္ထုရုပ်များရှိသဖြင့် အညမညပစ္စည်းနှင့် သဟဇာတပစ္စည်း ရပါ၏။
ဘ၀အသစ်ကို ဖန်တီးပေးသည့် သဘာဝနိယာမတရား
သေခါနီးအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရသူသည် သူ၏ ဘ၀တစ်သက်တာ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အကြောင်းအရာ များစွာအနက်မှ စွမ်းအားအကောင်းဆုံး အကြောင်းအရာက စဉ်းစား၍မဟုတ်ဘဲ မထင်မှတ်ထားသည့် အိပ်မက် တစ်ခု ရုတ်တရက်မက်လိုက်သည့်နှယ် စိတ်တံခါးဝသို့ အင်အားကြီးစွာဖြင့် အလိုအလျောက် ၀င်ရောက်လာ တတ် သည်။ လူမမာက ရွေးချယ်သောကြောင့် ပေါ်လာခြင်းလည်း မဟုတ်ပါ။ တွန်းဖယ်၍လည်း မရတော့ပါ။
ဤသဘောတရားကပင် ဘ၀အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပေတော့မည်။ သို့မဟုတ် ဘ၀တစ်သက်တာ မိမိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်၏ နိမိတ်သင်္ကေတများက အထက်ပါနည်းအတိုင်း ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက လားရောက်ရမည့်ဘ၀နှင့် ဆိုင်ရာအာရုံတို့က စိတ်တံခါးဝသို့ အင်အားကြီးစွာဖြင့် ၀င်ရောက်ကာ နေရာယူထား လေတော့သည်။ လူမမာက ဤအာရုံတို့ကို ရှောင်လွှဲမရဘဲ မတွေ့မြင်လိုသော်လည်း မြင်တွေ့နေရခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါ သည်။
ဤအကြောင်းတရားတို့ကပင် ဘ၀အသစ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားသည့် ကံနှင့် ကံ၏ အကျိုးဆက်များပေတည်း။ မကောင်းသည့် ငရဲနိမိတ်ကဲ့သို့သော အာရုံထင်လာသည့် လူမမာများကမူ ရုတ်တရက် ကြောက်လန့်တကြား အထိန်းအကွပ်မဲ့ အော်ဟစ်လာတတ်သဖြင့် သူနာပြုများက နှစ်သိမ့်အားပေးရ တတ်ကြောင်းနှင့် အချို့လူမမာများကမူ အလွန်အမင်း ကြောက်လန့်ကာ ရုန်းကန်နေတတ်ကြောင်းကိုလည်း သုတေ သနစာတမ်းများ၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
ဤသို့ ကြောက်လန့်တကြား သေခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် လူမမာကို စောင့်ရှောက်နေသူ မိသားစုဝင်များ အနေဖြင့် စိတ်မချမ်းမမြေ့ ဖြစ်ရုံသာမက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေခါနီးကာလ၌ အလားတူ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံမည် ကိုလည်း အထူးပင် စိုးရိမ်ကာ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်နေတတ်ကြပါသည်။ သေဆုံးခါနီး ဤဘ၀၏ နောက်ဆုံးစိတ်ကို ဖန်တီးပေးသူမှာ တန်ခိုးရှင်၊ ဖန်ဆင်းရှင် Creater, God မဟုတ်ဘဲ မိမိ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ် (ကမ္မ = ကံ)ပင် ဖြစ်ပါ သည်။ ဘ၀တစ်ခုကို ဖန်ဆင်းပေးနိုင်စွမ်းသည့် ကံလေးမျိုးရှိ၏။
(က) ကြီးလေးသော (ဂရုကံ) ပမာအားဖြင့် မိဘကိုသတ်သည့် ပဉ္စာနန္တရိယကံ။
(ခ ) အလေ့အလာအဖြစ် လိုလိုလားလားပြုလုပ်ခဲ့သည့် (အာစိဏ္ဏကံ)။ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ကြိမ်ဖန် များစွာ အလေ့အကျင့်များခဲ့သည့် ကံ (၀ါ) တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှပင် ပြုခဲ့သော်လည်း စိတ်ဝယ် ထပ်တလဲလဲ အောက်မေ့နေသည့် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ကံ။
(ဂ) သေခါနီးကာလ၌ ကပ်၍ပြုလုပ်သည့် (အာသန္နကံ)။ ပမာအားဖြင့် သေခါနီးကာလ သံဃာတော် များထံပါးမှ ပရိတ်တရားတော်များကို နာကြားခြင်း၊ သပိတ်၊ သင်္ကန်း စသည် လှူဒါန်းသည့်ကံ။
(ဃ) ဤကံသုံးမျိုး ထင်ဟပ်မလာနိုင်ပါက (ကဋတ္တာကံ)။ ဘ၀ါဘ၀များစွာက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်များအနက် တစ်ခုခု ထင်ဟပ်လာပါမည်။
သေခါနီးကာလတွင် ဤကံလေးမျိုးအနက် ကံတစ်ပါးပါးက စိတ်ကို အားကောင်းစွာ လွှမ်းမိုးထားမည် ဖြစ်ပါ သဖြင့် ကာယကံရှင်သည် ထိုအချိန်၌ ထိုအတွေးကို ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်း မရှိရှာတော့ပါ။ လူမမာ၏အနီး၌ ရဟန်းတော် များ၏ တရားအသံကို နာကြားနေရပါသော်လည်း စိတ်၌ ထင်ဟပ်နေသည့် ထိုအတွေးအာရုံကို ဖယ်ရှားနိုင်ရန် အခက်အခဲ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
ဤဘ၀၏ နောက်ဆုံးအချိန်တွင် ၎င်းအာရုံကပင် မရဏာသန္နဇောစိတ်ဖြစ်ကာ ဘ၀အသစ်တစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတော့မည်။ ဤသည်မှာ ဘာသာလူမျိုးနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် သဘာဝနိယာမတရား Natural Law ဖြစ်ပေသည်။
၆ – သဟဇာတပစ်စယော unicode
သဟ = အတူတကှ၊ ဇာတ = ဖွဈပျေါလာသညျ။ Born together or conascence.
သဟဇာတပစ်စညျး၏ ကြေးဇူးပွုပုံကို အဋ်ဌကထာမြားတှငျ မှောငျနသေညျ့ တိုကျခနျးထဲ၌ ဆီမီး ထှနျးလိုကျ သညျနှငျ့ ဆီးမီးတောကျခွငျး၊ အလငျးရောကျခွငျးနှငျ့ အမှောငျပြောကျခွငျးတို့သညျ တဈပွိုငျတညျး၊ တဈခြိနျတညျး ပျေါပေါကျလာကွသကဲ့သို့ စိတျ စတေသိကျမှနျသမြှ ဥပါဒျ ဌီ ဘငျအားဖွငျ့ တဈပွိုငျတညျး ဖွဈလာ၏ Born together ဟု ဥပမာ ပွုတျောမူကွပါသညျ။
မီးတောကျဟူသော အကွောငျးကွောငျ့ အလငျးရောငျဟူသော အကြိုးဖွဈပျေါလာရာတှငျ အကွောငျးနှငျ့ အကြိုးက တဈပွိုငျနကျတညျး၊ အခြိနျအားဖွငျ့လညျး တဈခြိနျတညျးဖွဈပျေါကာ ကြေးဇူးပွုသညျ့နှယျ ဖွဈ၏။ ဤတှငျ မဟာဘုတျမြားတပွိုငျတညျး Born together ဖွဈလာ၏။ စိတျနှငျ့ စိတ်တဇရုပျမြားလညျး တပွိုငျတညျး Born together ဖွဈလာကွ၏။
သဟဇာတပစ်စညျး၏သင်ျခြာမှာ – ၉ ဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ‘သဟဇာတေ နဝ’ ဟု မှတျသားနိုငျပါသညျ။ ထိုသင်ျခြာကို အောကျပါအတိုငျး လလေ့ာနိုငျပါသညျ –
ကုသလ ဓမ်မာ သင်ျခြာ-၃
(၁) ကု-ကု (၂) ကု-ဗြာ (၃) ကု-ကု-ဗြာ
အကုသလ ဓမ်မာ သင်ျခြာ-၃
(၁) အကု-အကု (၂) အကု-ဗြာ (၃) အကု-အကု-ဗြာ
အဗြာကတ ဓမ်မာ သင်ျခြာ-၁
ကုသလ ဗြာကတပဒ သင်ျခြာ -၁
အကုသလ ဗြာကတပဒ သင်ျခြာ -၁
ပုရဇောတ၊ ပစ်ဆာဇာတနှငျ့ သဟဇာတ
ပဋ်ဌာနျးတရားတျော၌ ပစ်စယ = ပစ်စညျးဟူသော အကွောငျးတရားနှငျ့ ပစ်စယုပ်ပနျဟူသော အကြိုးတရားတို့ ရှိရာတှငျ –
(က) ဦးစှာ အကွောငျးတရားပျေါပွီး အကြိုးတရားက နောကျမှပျေါသညျ့ (ပုရဇောတပစ်စညျး) Born earlier or prenascence.
(ခ ) အကွောငျးတရားနှငျ့ အကြိုးတရား တဈပွိုငျတညျး ပျေါပေါကျလာသညျ့ (သဟဇာတပစ်စညျး) Born together or conascence. နှငျ့
(ဂ ) ဦးစှာအကြိုးတရား ပျေါပေါကျလာပွီး အကွောငျးတရားက နောကျမှပျေါလာသညျ့ (ပစ်ဆာဇာတ ပစ်စညျး) Born laterer or postnascence. ဟူ၍ ရှိပါသညျ။
သဟဇာတပစ်စညျးတှငျ အကွောငျးဖွဈသညျ့ ပစ်စညျး၌လညျး ရုပျတရားနှငျ့ နာမျတရားပါသညျ။ အကြိုး တရားဖွဈသညျ့ ပစ်စယုပ်ပနျ၌လညျး ရုပျတရားနှငျ့ နာမျတရားမြားပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သဟဇာတပစ်စညျးတှငျ ရုပျနှငျ့ နာမျက အကွောငျးတရားလညျး ဖွဈသညျ။ အကြိုးတရားလညျး ဖွဈသညျ။
စတ်တာရော အရူပိနော = နာမျခန်ဓာလေးပါးဖွဈသညျ့ ဝဒေနက်ခန်ဓာ၊ သညာက်ခန်ဓာ၊ သင်ျခါရက်ခန်ဓာနှငျ့ ဝိညာ ဏက်ခန်ဓာ ရှိသညျ့အနကျ –
(က) နာမျခန်ဓာတဈပါးက သုံးပါးကို ကြေးဇူးပွုရာတှငျ ဥပမာ ဝဒေနက်ခန်ဓာက အကွောငျးတရား ဖွဈပါက ကနျြသုံးပါးဖွဈသညျ့ သညာက်ခန်ဓာ၊ သင်ျခါရက်ခန်ဓာနှငျ့ ဝိညာဏက်ခန်ဓာတို့က အကြိုးတရား။ “ဧကော ခန်ဓော တိဏ်ဏန်နံ ခန်ဓာနံ သဟဇာတပစ်စယနေ ပစ်စယော။”
(ခ ) နာမျခန်ဓာနှဈပါး ကနျြသုံးပါးကို ကြေးဇူးပွုရာတှငျ ဥပမာ ဝဒေနက်ခန်ဓာနှငျ့ သညာက်ခန်ဓာက အကွောငျး တရားဖွဈလြှငျ ကနျြနှဈပါးဖွဈသညျ့ သင်ျခါရက်ခန်ဓာနှငျ့ ဝိညာဏက်ခန်ဓာက အကြိုးတရား။
“ဒှေ ခန်ဓော ဒှဏ်ေဏန်နံ ခန်ဓာနံ သဟဇာတပစ်စယနေ ပစ်စယော။”
နာမျခန်ဓာ ၄-ပါးကို ခန်ဓာဖှဲ့ပါက –
စတ်တာရောခန်ဓာ အရူပိနောဓမ်မာ = (နာမျခန်ဓာလေးပါး) ၁ – ဝဒေနက်ခန်ဓာ၊ ၂ – သညာက်ခန်ဓာ၊ ၃ – သင်ျခါရက်ခန်ဓာ၊ ၄ – ဝိညာဏက်ခန်ဓာကို ဆိုလိုခွငျး ဖွဈပါသညျ။
စတေသိကျ ၅၂-ပါးကို ခန်ဓာဖှဲ့ပါက –
– ဝဒေနာစတေသိကျက ဝဒေနက်ခန်ဓာ တဈပါးရ၏။
– သညာစတေသိကျက သညက်ခန်ဓာ တဈပါးရ၏။
– ကနျြသညျ့စတေသိကျ – ၅၀ က သင်ျခါရက်ခန်ဓာတဈပါးရ၏။
– စိတျ ၈၉-ပါးက ဝိညာဏက်ခန်ဓာရ၏။
ဤနာမျခန်ဓာတို့သညျ သဟဇာတ = အတူတကှ။ အညမည = အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ ကြေးဇူးပွုပါသညျ။
သူတို့ကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့ စိတ်တဇရုပျကိုလညျး ကြေးဇူးပွု၏။ ပါဠိစာပေ၌လာရှိသညျ့ ပဋိသန်ဓိကို မွနျမာ စာပတှေငျ ပဋိသန်ဓဟေု သုံးနှုနျးသညျ။ ပဋိသန်ဓစေိတျ၏ အဓိပ်ပါယျမှာ ဘဝဟောငျးနှငျ့ ဘဝအသဈကို ဆကျစပျပေး သညျ့စိတျ ဖွဈပါသညျ။ ပဋိသန်ဓစေိတျကို နရောအားလြှျောစှာ ဝိပါကျစိတျဟုလညျး ချေါ၏။
ပဋိသန်ဓကေမ်မဇရုပျ၌ ဟဒယဝတ်ထုရုပျပါသညျ။ ခဏငယျသုံးခကျြအတှငျး ဟဒယဝတ်ထုရုပျက (အကွောငျး တရား)၊ ပဋိသန်ဓစေိတျကလေးက (အကြိုးတရား)အဖွဈ သဟဇာတသတ်တိနှငျ့ အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျ ကြေးဇူး ပွု၏။
အမိဝမျးထဲ ပဋိသန်ဓတေညျသညျ့ သတ်တဝါတို့တှငျ နာမျတရားအဖွဈ ပဋိသန်ဓဝေိညာဏျစိတျနှငျ့ စတေသိကျ ၃၃-ပါး၊ ရုပျတရားအဖွဈ ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက၊ ဝတ်ထုဒသကဟူသော ကံကွောငျ့ဖွဈသညျ့ ကမ်မဇရုပျ ကလာပျ သုံးစု (သုံးစညျး) တို့သညျ တဈပွိုငျတညျး ဖွဈလာကွသညျ။
ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသကနှငျ့ ဝတ်ထုဒသက
(က) ကာယဒသကဟူသညျ ကာယပသာဒ၊ ဇီဝိတရုပျ၊ အဋ်ဌကလာပျရုပျ ၈-ပါး ဟူသော ကာယ ဒသက။
(ခ ) ဘာဝဒသကဟူသညျ ကမ်မဇကလာပျ ကိုးစညျး၌ပါသညျ့ အထီး အမ ခှဲခွားစသေညျ့ ဣတ်ထိဘာဝ ဒသက ကလာပျဖွဈစေ၊ ပုမ်ဘာဝဒသကကလာပျ။
(ဂ) ဝတ်ထုဒသကဟူသညျ ဟဒယဝတ်ထုရုပျ ဇီဝိတ အဋ်ဌကလာပျ။
(ဃ) သုတ်တနျဒသေနာတျောအရ ပဋိသန်ဓအေခါကိုယူရာတှငျ အမဝေ့မျးထဲ ရောကျသညျ့အခြိနျကစပွီး မဖှားမခငျြး ကာလကို ယူပါသညျ။ အဘိဓမ်မာဒသေနာ၌မူ ပဋိသန်ဓစေိတျ၏ ဥပါဒျ ဌီ ဘငျ ခဏငယျ သုံးခကျြအတှငျးကိုသာ ပဋိသန်ဓအေခိုကျဟု ယူပါသညျ။
ပဉ်စဝေါကာရ၊ စတုဝေါကာရ၊ ဧကဝေါကာရ
(က) စတုဝေါကာရဘုံဟူသညျ နာမျခန်ဓာလေးပါးသာ ရှိသညျ့ဘုံ။
(ခ ) ဧကဝေါကာရဘုံဟူသညျ ခန်ဓာတဈပါးသာရှိသညျ့ အသညသတျဘုံ။
(ဂ ) ပဉ်စဝေါကာရဘုံဟူသညျ ခန်ဓာငါးပါးရှိသညျ့ဘုံ။ ထိုထိုဘုံမြားအနကျ ခန်ဓာငါးပါးရှိသညျ့ ဘုံကသာ ပဋိသန်ဓနှေငျ့ ဟဒယဝတ်ထုရုပျမြားရှိသဖွငျ့ အညမညပစ်စညျးနှငျ့ သဟဇာတပစ်စညျး ရပါ၏။
ဘဝအသဈကို ဖနျတီးပေးသညျ့ သဘာဝနိယာမတရား
သခေါနီးအခွအေနကေို ရငျဆိုငျနရေသူသညျ သူ၏ ဘဝတဈသကျတာ ပွုလုပျခဲ့သညျ့ အကွောငျးအရာ မြားစှာအနကျမှ စှမျးအားအကောငျးဆုံး အကွောငျးအရာက စဉျးစား၍မဟုတျဘဲ မထငျမှတျထားသညျ့ အိပျမကျ တဈခု ရုတျတရကျမကျလိုကျသညျ့နှယျ စိတျတံခါးဝသို့ အငျအားကွီးစှာဖွငျ့ အလိုအလြောကျ ဝငျရောကျလာ တတျ သညျ။ လူမမာက ရှေးခယျြသောကွောငျ့ ပျေါလာခွငျးလညျး မဟုတျပါ။ တှနျးဖယျ၍လညျး မရတော့ပါ။
ဤသဘောတရားကပငျ ဘဝအသဈတဈခုကို ဖနျတီးပေးပတေော့မညျ။ သို့မဟုတျ ဘဝတဈသကျတာ မိမိ ပွုလုပျခဲ့သညျ့ အလုပျ၏ နိမိတျသင်ျကတေမြားက အထကျပါနညျးအတိုငျး ပျေါလာတတျပါသညျ။ သို့မဟုတျပါက လားရောကျရမညျ့ဘဝနှငျ့ ဆိုငျရာအာရုံတို့က စိတျတံခါးဝသို့ အငျအားကွီးစှာဖွငျ့ ဝငျရောကျကာ နရောယူထား လတေော့သညျ။ လူမမာက ဤအာရုံတို့ကို ရှောငျလှဲမရဘဲ မတှမွေ့ငျလိုသျောလညျး မွငျတှနေ့ရေခွငျးမြိုး ဖွဈပါ သညျ။
ဤအကွောငျးတရားတို့ကပငျ ဘဝအသဈတဈခုကို ဖွဈပျေါလာစရေနျ သဘာဝက ဖနျတီးပေးထားသညျ့ ကံနှငျ့ ကံ၏ အကြိုးဆကျမြားပတေညျး။ မကောငျးသညျ့ ငရဲနိမိတျကဲ့သို့သော အာရုံထငျလာသညျ့ လူမမာမြားကမူ ရုတျတရကျ ကွောကျလနျ့တကွား အထိနျးအကှပျမဲ့ အျောဟဈလာတတျသဖွငျ့ သူနာပွုမြားက နှဈသိမျ့အားပေးရ တတျကွောငျးနှငျ့ အခြို့လူမမာမြားကမူ အလှနျအမငျး ကွောကျလနျ့ကာ ရုနျးကနျနတေတျကွောငျးကိုလညျး သုတေ သနစာတမျးမြား၌ ဖျောပွထားပါသညျ။
ဤသို့ ကွောကျလနျ့တကွား သခွေငျးကို ရငျဆိုငျနရေသညျ့ လူမမာကို စောငျ့ရှောကျနသေူ မိသားစုဝငျမြား အနဖွေငျ့ စိတျမခမျြးမမွေ့ ဖွဈရုံသာမက ကိုယျကိုယျတိုငျ သခေါနီးကာလ၌ အလားတူ အဖွဈဆိုးမြိုး ကွုံမညျ ကိုလညျး အထူးပငျ စိုးရိမျကာ ထိတျလနျ့ တုနျလှုပျနတေတျကွပါသညျ။ သဆေုံးခါနီး ဤဘဝ၏ နောကျဆုံးစိတျကို ဖနျတီးပေးသူမှာ တနျခိုးရှငျ၊ ဖနျဆငျးရှငျ Creater, God မဟုတျဘဲ မိမိ ပွုလုပျခဲ့သညျ့အလုပျ (ကမ်မ = ကံ)ပငျ ဖွဈပါ သညျ။ ဘဝတဈခုကို ဖနျဆငျးပေးနိုငျစှမျးသညျ့ ကံလေးမြိုးရှိ၏။
(က) ကွီးလေးသော (ဂရုကံ) ပမာအားဖွငျ့ မိဘကိုသတျသညျ့ ပဉ်စာနန်တရိယကံ။
(ခ ) အလအေ့လာအဖွဈ လိုလိုလားလားပွုလုပျခဲ့သညျ့ (အာစိဏ်ဏကံ)။ ဘဝတဈလြှောကျလုံး ကွိမျဖနျ မြားစှာ အလအေ့ကငျြ့မြားခဲ့သညျ့ ကံ (ဝါ) တဈကွိမျ တဈခါမြှပငျ ပွုခဲ့သျောလညျး စိတျဝယျ ထပျတလဲလဲ အောကျမနေ့သေညျ့ ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျကံ။
(ဂ) သခေါနီးကာလ၌ ကပျ၍ပွုလုပျသညျ့ (အာသန်နကံ)။ ပမာအားဖွငျ့ သခေါနီးကာလ သံဃာတျော မြားထံပါးမှ ပရိတျတရားတျောမြားကို နာကွားခွငျး၊ သပိတျ၊ သင်ျကနျး စသညျ လှူဒါနျးသညျ့ကံ။
(ဃ) ဤကံသုံးမြိုး ထငျဟပျမလာနိုငျပါက (ကဋတ်တာကံ)။ ဘဝါဘဝမြားစှာက ပွုလုပျခဲ့သညျ့ ကုသိုလျ၊ အကုသိုလျမြားအနကျ တဈခုခု ထငျဟပျလာပါမညျ။
သခေါနီးကာလတှငျ ဤကံလေးမြိုးအနကျ ကံတဈပါးပါးက စိတျကို အားကောငျးစှာ လှမျးမိုးထားမညျ ဖွဈပါ သဖွငျ့ ကာယကံရှငျသညျ ထိုအခြိနျ၌ ထိုအတှေးကို ဖယျရှားနိုငျစှမျး မရှိရှာတော့ပါ။ လူမမာ၏အနီး၌ ရဟနျးတျော မြား၏ တရားအသံကို နာကွားနရေပါသျောလညျး စိတျ၌ ထငျဟပျနသေညျ့ ထိုအတှေးအာရုံကို ဖယျရှားနိုငျရနျ အခကျအခဲ ရှိကောငျး ရှိနိုငျပါသညျ။
ဤဘဝ၏ နောကျဆုံးအခြိနျတှငျ ၎င်းငျးအာရုံကပငျ မရဏာသန်နဇောစိတျဖွဈကာ ဘဝအသဈတဈခုကို ဖျောဆောငျပေးပါတော့မညျ။ ဤသညျမှာ ဘာသာလူမြိုးနှငျ့ မသကျဆိုငျသညျ့ သဘာဝနိယာမတရား Natural Law ဖွဈပသေညျ။